မပွုံးပဲမနနေိုငျတဲ့ ကွောငျလေးတှရေဲ့ ဟာသပုံ (၂၁) ပုံ
HomeKnowledgeမပွုံးပဲမနနေိုငျတဲ့ ကွောငျလေးတှရေဲ့ ဟာသပုံ (၂၁) ပုံ
ဒီနှဈအတောအတှငျးမှာ ကွောငျပုံလေးတှနေဲ့ ကွောငျဗီဒီယိုလေးတှကေ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာတှပေျေါမှာ ခတျေအစားဆုံး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
" ကွောငျတှကေ သဘာတရားရဲ့ နိယာမတှကေိုတောငျ မလိုကျနာကွပါဘူး။ ကွောငျတှရေဲ့အကွောငျးကို လူတှေ သိပျမသိကွပါဘူး" လို့ It's always sunny in Philadelphia ဇာတျလမျးတှဲက Charlie Day က ပွောဖူးပါတယျ။ တဈနတေ့ာမှာ ပြျောရှငျစဖေို့အတှကျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကွောငျပုံလေးတှကျေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
1. တဈရေးတမော အိပျတတျတဲ့ကွောငျလေး
© 00zim00 / reddit
2. Mission Impossible (Cat version )
© InsertFeelsHere / reddit
3. ရှူး...... ငွိမျငွိမျလေးနေ
4. တဈခါတလမှော နရောဒသေကိုလိုကျပွီး အံဝငျခှငျကြ နတေတျရတယျ
© aannnnaabanana / reddit
5. အဆငျပွရေဲ့လား ကလေးရယျ
© PLUSsignenergy / reddit
6. နောကျဆုံးတော့ အိမျမှာတဈယောကျတညျး အေးဆေးနနေိုငျခဲ့ပွီ
7. မသိခငျြယောငျ ဆောငျရဲတယျပေါ့လေ
© DayDreamer089 / reddit
8. နောကျမဈရှငျအတှကျ အဆငျသငျ့ပဲလား
© edamamemonster / reddit
9. ဝငျအိပျလို့ ဆံ့ပါ့မလား။ ဆံ့တယျဟ...
10. ကွောငျလား၊ စောငျလား
© sawakosawa3 / twitter
11. ကွောငျတှကေ သဘာဝတရားရဲ့ နိယာမတှကေိုလညျး မလိုကျနာဘူးပါဘူးနျော
© getoutoftherecat / tumblr
12. ကွောငျမမတှရေဲ့ အခနျးထဲကို ဝငျရဲတယျနျော
© catasters / tumblr
© Nirami / reddit
14. Ikea ခုံပျေါက ကွောငျလေးက ငွိမျငွိမျမနပေါလား
© --Wabi-Sabi-- / reddit
15. လူဆိုးဖမျးဖို့ စောငျ့နတောကှ
© insight_owner / reddit
16. ငါ့ကိုလညျး အဖကျလုပျကွပါဦး
© xblade724 / reddit
17. တျောတျောအဆငျပွတေယျ။ ဒီမှာပဲ ထိုငျလိုကျတော့မယျ။
© kraken888 / reddit
18. ခရမျးရောငျနံရံကို မကွိုကျတဲ့ကွောငျ
© unknown / blogspot
19. ငါတို့ သောကျနိုငျပါ့မလား။
© Hurricane96 / reddit
20. ဒရမျတီးတဲ့ကွောငျလား၊ စိတျညဈနတေဲ့ကွောငျလား
© aktfps / twitter
21. Istanbul မွို့ရဲ့အထာအကဆြုံးကွောငျ
© beenart / reddit
ဒီကွောငျပုံလေးတှကွေညျ့ပွီး ပရိသတျကွီးလညျး ပွုံးနလေောကျပါပွီ။ ဘယျကွောငျကို အိမျချေါသှားခငျြလဲ.. ဒါမှမဟုတျ ပရိသတျကွီးရဲ့ကွောငျလေးတှထေဲက ဘယျကွောငျက ရှကွေောငျဆုကို ရသှားမလဲ။ ခဈြစရာကွောငျပုံလေးတှကေို comment မှာ မနျ့သှားပေးဦးနော့။
မပြုံးပဲမနေနိုင်တဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ဟာသပုံ (၂၁) ပုံ
ဒီနှစ်အတောအတွင်းမှာ ကြောင်ပုံလေးတွေနဲ့ ကြောင်ဗီဒီယိုလေးတွေက လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ခေတ်အစားဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
" ကြောင်တွေက သဘာတရားရဲ့ နိယာမတွေကိုတောင် မလိုက်နာကြပါဘူး။ ကြောင်တွေရဲ့အကြောင်းကို လူတွေ သိပ်မသိကြပါဘူး" လို့ It's always sunny in Philadelphia ဇာတ်လမ်းတွဲက Charlie Day က ပြောဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြောင်ပုံလေးတွေက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. တစ်ရေးတမော အိပ်တတ်တဲ့ကြောင်လေး
3. ရှူး...... ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ
4. တစ်ခါတလေမှာ နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျ နေတတ်ရတယ်
5. အဆင်ပြေရဲ့လား ကလေးရယ်
6. နောက်ဆုံးတော့ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း အေးဆေးနေနိုင်ခဲ့ပြီ
7. မသိချင်ယောင် ဆောင်ရဲတယ်ပေါ့လေ
8. နောက်မစ်ရှင်အတွက် အဆင်သင့်ပဲလား
9. ဝင်အိပ်လို့ ဆံ့ပါ့မလား။ ဆံ့တယ်ဟ...
10. ကြောင်လား၊ စောင်လား
11. ကြောင်တွေက သဘာဝတရားရဲ့ နိယာမတွေကိုလည်း မလိုက်နာဘူးပါဘူးနော်
12. ကြောင်မမတွေရဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်ရဲတယ်နော်
14. Ikeaခုံပေါ်က ကြောင်လေးက ငြိမ်ငြိမ်မနေပါလား
15. လူဆိုးဖမ်းဖို့ စောင့်နေတာကွ
16. ငါ့ကိုလည်း အဖက်လုပ်ကြပါဦး
17. တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ ဒီမှာပဲ ထိုင်လိုက်တော့မယ်။
18. ခရမ်းရောင်နံရံကို မကြိုက်တဲ့ကြောင်
19. ငါတို့ သောက်နိုင်ပါ့မလား။
20. ဒရမ်တီးတဲ့ကြောင်လား၊ စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြောင်လား
21. Istanbul မြို့ရဲ့အထာအကျဆုံးကြောင်
ဒီကြောင်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးလည်း ပြုံးနေလောက်ပါပြီ။ ဘယ်ကြောင်ကို အိမ်ခေါ်သွားချင်လဲ.. ဒါမှမဟုတ် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကြောင်လေးတွေထဲက ဘယ်ကြောင်က ရွှေကြောင်ဆုကို ရသွားမလဲ။ ချစ်စရာကြောင်ပုံလေးတွေကို comment မှာ မန့်သွားပေးဦးနော့။